चित्रमा हौसिदै दोलखाका होटल व्यवसायी
चित्रमा हौसिदै दोलखाका होटल व्यवसायी क्यानभास बन्दै छन क्याफेका भित्ताहरु
जीवन लामा शुक्रबार, भदौ ५, २०७७
ड्रिम्स क्याफेमा छिर्ने बित्तिकै क्यानभास पुगेको आभास हुन्छ । के खाने र कहाँनेर बस्ने भन्दापनि भित्ताभरि कोरिएका चित्रमा आँखा डुल्छ । देखेका, सुनेका र आफ्नै गाउँठाउँमा भएका बस्ती, झरना, खोलानाला, हिमालका चित्रहरु नियाल्दा त्यही पुगेझैं लाग्छ । अझ निकै मिहिनेतकासाथ कोरिएका चित्रहरुमा आँखा गाडिरहदा त झन अर्कै संसारझैं लाग्छ ।
जिल्लाकै पहिलो र धेरै विद्यार्थीको रोजाई रहेको गौरीशंकर बहुमुखी क्याम्पस अहिले विद्यार्थीको मात्र नभई अभिभावक र युवाको सेल्फी केन्द्र बनेको छ । क्याम्पस छिर्ने प्रवेशद्धार नजिकै गौरीशंकर हिमाल र वरिपरि बस्तीको कोरिएका चित्रले पहिलो आँखा त्यही पुग्ने गर्छ । प्राय अहिले धेरैको फेसबुक वाल भरिएका छन् तिनै चित्रहरुले ।
सातदोबाटो नजिकै खुल्ने तयारीमा रहेको किङ्स क्याफेमा गौरीशंकरमा रहेको छ्योतछ्योत झरना र चरिकोटको ताररहित बजार हुँदा देखिने सुन्दरताको चित्रले पनि धेरैको मन तानेको छ । भित्तमा कोरीएका चित्रहरु हेर्दा लाग्छ, कहाँ हो ? कुन ठाउँ हो ? धेरैलाई कौतुहलता बनाएको छ यी चित्रहरुले ।
२०७६ चैत्र ११ गतेदेखि सुरु भएको लकडाउनले धेरैको व्यापार व्यवसाय र देशकै अर्थतन्त्र डामाडोल भईरहदा पनि होटल व्यवसायीहरु लाखौ खर्चिन तयार छन् । कोडिभ १९ ले सबैलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा असर पारेको छ । तर होटल व्यवसायीहरु आफ्ना व्यवसायलाई निरन्तरताको लागि नयाँ नयाँ प्रस्तुतिहरु ग्राहकलाई पस्किन थालेका छन् । ग्राहकको इच्छा, चाहना अनुरुपको फरक फरक स्वादको परिकार र मनोरञ्जनको लागि होटल व्यवसायीहरु लगानी गर्न बाध्य भएको ड्रिम्स क्याफेका सञ्चालक भरत श्रेष्ठको भनाई छ । मीठो खानेकुराको साथै एकैछिन फेसबुकमा नयाँ सिनको फोटो पोष्ट गर्न ग्राहकको इच्छा हुने भएकाले लाखौ खर्चेरै चित्रहरु कोरिएको श्रृष्ठ बताउनुहुन्छ ।
प्रतिभा भएर पनि ओझेलमा परेका आर्टिष्ट हरि केसीलेनै गौरीशंकर क्याम्पस र ड्रिम्स क्याफेमा चित्रहरु कोरेका हुन । भूकम्पपछि पनि टिएलसीहरुमा विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्ने खालका चित्रहरु कोरिएका थिए । अहिले धेरैको मन चित्रमा भएकाले जिल्लाकै पहिचान दिने खालका चित्रहरु कोरिन लागेको बताउनुहुन्छ आर्टिष्ट हरि केसी । आफू त्यहाँ नपुगे तापनि फोटोमा हेरेको भरमा आकर्षक चित्रहरु परिकल्पना गरी कोर्ने गरेको के.सी.को भनाई छ । जसले गर्दा जिल्लाकै पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत टेवा पुग्ने सबैले विश्वास गरेका छन् ।
कफी चिया खाने र सेल्फी खिच्नको लागि यस्ता खालका चित्रहरु धेरैको रोजाईमा पर्ने भएकाले क्याफेमा चित्र कोर्न आर्टिष्ट झिकाएको किङ्स क्याफेका सञ्चालक बद्री थापा बताउनु हुन्छ । पोखरा, भोर्ले झरना नपुगेका व्यक्तिहरुलाई यही चित्र हेर्दैमा जाउँ जाउँ लाग्ने बनाउनको लागि काठमाडौबाट आर्टिष्ट सूर्य लामा ल्याएको वहाँ बताउनुहुन्छ । त्यहाँ कोरिएका चित्रले धेरैको मन लोभ्याउने गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ ५, २०७७, १४:११:००